Laba nin oo ka tirsan Ururka Al Shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Dowladda | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Laba nin oo ka tirsan Ururka Al Shabaab oo isku soo dhiibay...
Laba nin oo ka tirsan Ururka Al Shabaab oo isku soo dhiibay Ciidanka Dowladda
Laba nin oo ka tirsan Ururka Al Shabaab ee ka dagaalama Gobolada Koonfureed, ayaa waxay saacadihii ugu dambeeyay ay isu soo dhiibeen Ciidanka Dowladda, ee ka hawlgala Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Labadaan nin, ayaa ka tirsanaa Shabaabka ku dhuumaaleysanaaya inta u dhaxeyso Garbahaarey iyo Buurdhuubo, wuxuuna isa soo dhiibkoodaan uu ka dambeeyay, wada hadalo dhex maray Saraakiisha Ciidamada Dowladda.
C/xakiin Maxamed Cumar, Taliyaha Saldhiga Dhexe ee Garbahaarey, ayaa wuxuu xaqiijiyay in labada nin ay la jooggaan Saldhiga, isla-markaana ay si qurux badan leh u soo dhaweeyeen.
Taliyaha, ayaa ku waramaaya in dhaqancelin ay u samayn doonaan ragga ka soo baxsaday Ururka Al Shabaab, oo weeraro joogto ah ku haaya kolonyada isugu kala goosheysa Garbaarey iyo Buurdhuubo.
C/xakiin Maxamed oo u waramay Idaacada Barkulan ee Magaalada Muqdisho, ayaan kala cadayn in raggaan ay hub kala soo baxsadeen Shabaabka iyo in kale, marka laga soo taggo inay wada hadalo ku yimaadeen.
Xubno badan oo horey kaga tirsanaa Ururka Al Shabaab, ayaa maanta ka barbar dagaalamaaya Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ahlu Sunada Gobolada Koonfureed, ee ka hawlgala Gobolka Gedo.
Shabaabku loogama baran inay ka hadlaan kolka xubno ka tirsan ay ku biiraan dhinacyada kale, ee ka soo horjeeda.